Usuke Enhluphekweni Waya Esikhundleni Sobuholi – College of Health Sciences
Home » News » Usuke Enhluphekweni Waya Esikhundleni Sobuholi
Ukuthatha le ndima yokuba ngumholi wezemfundo kuwumsebenzi owethusayo kodwa uPillay ukwenze lokhu ngenkuthalo enkulu. ‘Isikhundla sami esisha sobuholi siyisinyathelo esilandelayo kule ndlela yami yokuthuthuka njengomuntu kanye nasohambweni lwami lwezemfundo. Nginomdlandla omkhulu ngalokhu kuqokwa okuyingqayizivele njengoba kungenza ngibe yisifundiswa, umholi ekufundeni nasekufundiseni kanye nomcwaningi. Umbono wami… ukuhlinzeka ngokweseka ngokubambisana nabasebenzi abaqeqeshiwe bezemfundo ukuze kusetshenziswe amasu okufunda nokufundisa eSikoleni se-LMMS angabazuzisa abafundi futhi andise imiphumela. Ngaphezu kwalokho, iSikole sizobe sibhekene nezinguquko zohlelozifundo lweziqu zesayensi yezokwelapha futhi mina namalungu ethimba lami sizobandakanyeka ngokugcwele ngaphakathi kweSikole ukuqinisekisa ukuthi le phrojekthi iyaphothulwa ekupheleni kwesikhathi sami seminyaka emithathu. Ngizolwela iqophelo eliphezulu ekufundeni nasekufundiseni ku-LMMS.’